Kooxda Genoa oo soo gaba gabeysay rikoorkii guulaha ee Juventus kaddib guul muhiim ah oo ay ka gaareen – Gool FM
(Italay) 17 Marso 2019 Kooxda Genoa ayaa guuul daro labo gool iyo waxba biday kooxda Juventus kulan ka tirsanaa horyaalka Dalka Italy ee serea A.
Qeebti koowaad ee kulan ciyareedka kooxaha Juventus iyo Genoa ayaa ku hishiiyey bar-baro gool la’aan ah wallow labada koox ay soo bandhigeen kubad loo riyaaqo .
Geesigii Juventus u suura giliyey in ay ka sii mid ahaato kooxaha baaqiga ku ah tartanka Champions League ee Ronaldo ayaa gabi ahaanba laga saaray kulankan .
Kooxda Genoa oo ku ciyaareysay garoonkeeda ayaa kubada la qeebsaneysay kooxda Juve iyaga oona sameeyey weeraro cajiib ah qeebtii koowaad ee ciyaarta , halka Juve si lamid ah ay sameyeen dhowr fursadood balse uma saamixin in ay gool dhaliyaan .
Kulan ciyaareedka qeebtiis koowaad ayaa ku dhamaaday bareejo , nasiino kaddib waxaa dib loo anaba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta kooxda Juventus ayaa dhalisay gool markii dambe noqday garab dhaafa waxaana isku daygaas sameyey laacibka reer Argentina ee Paulo Dybala .
Ugu dambeen kooxda Genoa ayaa heshay goolka koowaad ee ciyaarta waxaana daqiiqadii 72-aad u dhaliyey Stefano Sturaro kaddib caawin uu ka helay Goran Pandev.
Daqiiqado yar kaddib kooxda Genoa ayaa markale heshay goolkii lbaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey caawiyihii goolkii koowaad ee Goran Pandev kaddib caawin uu ka helay Christian Kouame daqiiqadii -81aad ee ciyaarta .
Ugu dambeen kulan ciyaareedka labada koox ayaa ku dhamaaday 2-0 oo ay ku adkaatay kooxda Genoa oo cashar u dhigtay kooxda Cajuusta .